Motion Graphics isticmaali video ama animation si ay u abuuraan khayaal ah ee mooshin, oo run ahaantii laga saaray horumarinta barnaamijyada sida dib Dhibaatooyinka ka dhigi abuuro style ah animation si cadaalad ah mid sahlan. Sababtoo ah ee ay caanka ah ee naqshadeynta mooshin dad badan oo doonayaa in aan arko waxa ku lug leh, si aynu isla eegno fikradda aasaasiga ah.
Fur halabuurka cusub, isticmaalka aad rabto in aad wax kasta oo xal goobaha inay ka shaqeeyaan, oo markaas la abuuro lakabka asalka u ah mashruuca la isticmaalayo ah lakabka> New> adag , aad rabto in aad doorato a midab dhalaalaya u fiican tahay si animation oo dhan u taagan.
Markaas waxaad yeelan doontaa bar bilow u ah mashruuca.
2. Samaynta qaab aad
Waayo, kanu Motion Graphic Waxaan doonayaa inaan la abuuro kubad ka dibna waxaa dhiirogelin. Qalab qaab laftiisa waa ku menu ugu sareeya, default sida caadiga ah waa square ah, laakiin guji iyo hay iyo aad kala dooran kartaa qaababka kale ee la heli karo. Waxaad kaloo isticmaali kartaa toobiye Q uu tan sameeyo.
Waxaan doortay ellipse ah halkaan, waxaad dooran kartaa qalab ka dibna riix in kooban oo ka soo bixiyo qaab haddii aad rabto, si kastaba ha ahaatee toobiye deg deg ah waa in ay si fudud u laban laabo guji icon qalab markuu ayaa lagu wadaa inuu qaab aad u jeclaystay, iyo doonto si toos ah loo abuuro qaab size buuxda ee ka kooban oo xuddun. Tani waxay sidoo kale waxa uu faa'iido u ah samaynta dhibic ay noqoto meesha u shayga bartamaha jir ah, kaas oo karo, waxayna ku xiran tahay fikrad animation aad, waxay noqon mid waxtar leh.
Trick kale marka la muuqaalo ka shaqeeya waa in haddii aad rabto in goobo kaamil ah, waxaad bilaabi kartaa iyadoo ellipse ah, oo taga si hantida size of shayga, iyo alt guji silsilad icon ee qasbaan Joogaba, oo si toos ah u dhigeysaa dhererka iyo balladhka isku mid. Wixii ellipse ah, taas macneheedu waxa weeye waxa goobtii uu noqonayaa goobaabin.
Markaas waa kiis kaliya ee la qabsado tirada, si loo waafajiyo, waxaan ugu dambaynta in la abuuro Korsiga animation kubad si ay u baahan tahay in ay qayb ilaa xad ah oo yar yar.
Haddaba sidaas daraaddeed waxaan leenahay kubada, diyaar u ah inay nooleyn.
3. dhiirogelin kubada
Iyadoo naqshadeynta mooshin, waxaa inta badan badan oo xubno yar oo ka mid ah dhaqdhaqaaqa iyo si loo sameeyo wax sahlan in la raaco waxaan ka dhigi kara meel shaqada u element kasta oo yar. Kubad ku dhexjiro waxaa dhab ahaan socda oo kaliya in ay isku xigxig yar oo ku saabsan 4 seconds, taas oo aan markaas uun ku celin karaa (loop) haddii loo baahdo. Sidaas, waxaan dhigay kartaa dulqabo waqti ay 4 seconds iyo N jaraa'id keyboard, waxaana la abuuro goobta shaqada laga soo bilaabo bilowgii in afar dhibic labaad. Waxaad nooleyn kara mashruuca aan tallaabadaas dabcan, laakiin waxa aanu ka dhigi abaabulka wax yar ka sahlan.
Hadda, marka dhiirogelin aad runtii u baahan in la qorsheeyo waxa aad doonayso in aad qabato inta aanad bilaabin, ugu yaraan fikrad asaasiga ah. Halkan waxaan doonayaa inaan kubada in ay ka yimaadaan off sare ee shaashadda oo Isku Xigta. Waxa ugu horeeya ee aan sameeyo waa inay u soo guuraan waqtiga in ku dhow saddex meelood labaad ee, hoos kubada u dhaqaajiso si ay hal dhibic ka hooseeya waxaan doonayaa inaan aado, iyo in la abuuro keyframe ah adigoo gujinaya stopwatch soo socda si ay boos.
Next, waxaan dib u bilowga tago oo dhigay dhibic bilowga daaha kubada off ah. Si aad u hubiyo in lagu dhibciyo vertical, si aad hoos u qabtaan wareeg sida aad jiidi shayga la mouse (tani sidhab ah dhidibka x si ku dhaqaaqdo in diyaarad hal), ama isticmaal qiimaha booska si ay ula qabsadaan qiimaha dhidibka hal kaliya.
Hadda waxaad haysataa tagtey kubada galay shaashadda iyo garaacid heerka aan ka qoondeeyey dabaqa. Hadda waxaan u baahan nahay in la dhiso Xigta. Sidaas awgeed, waxaan ku horumarin waqtiga mar kale ka baxsan keyframe hore, saddex meelood meel kale oo labaad ama si, ma aha sayniska sax ah, ka eeg waxa ugu wanaagsan ee halkan ka shaqeeya. Haatan waxaan la abuuro naga kaalinta saddexaad. Hadda sida caadiga ah ee suulka, u saamayn ugu fiican shay waa in kabsato meel u dhaxaysa saddex meelood in badh oo sarajooggeeduna wuxuu asalka ah, si aan booska aan kubada ku habboon on keyframe this.
Sida iska cad waxa kor waa u soo degay, oo sidaas daraaddeed dhaqaaqo soo socda ayaa dib ugu soo dejiyey dhulka mar kale. Si loo xaqiijiyo in aad leedahay meesha saxda ah la mid ah sida ka hor inta aadan nuqul fudud in keyframe dabaqa hore waxaan dhigay iyo paste waqtiga meel kasta oo dulqabo waa awoodo.
Hadda waxa aannu leenahay animation aasaasiga ah, dhibciyo naga kubad shaashadda, bounces mar iyo beero.
4. qabsashada animation ah
Inkasta oo aanu leenahay dhaqdhaqaaqa, waxa aanu run ahaantii siin saamaynta kubad-kabashada, sida ku dhaqaaqdo aad isku ka barta mid kale. Si aad halkan ka caawin waxaan dooran kartaa oo dhan 4 keyframes, xaq guji dooro fudayd Easy ka kaaliyaha keyframe, taas habaysaa xawaaraha dhaqdhaqaaqa u dhaxeeya uguna dambeeyay u mooshin ka badan ka farxiya.
Si kastaba ha ahaatee, waxaan nadiifin karo xataa dheeraad ah iyadoo la isticmaalayo qalab garaafka.
Hadda, garaafka tusi kartaa guryaha badan oo kala duwan, sida aan halkan diiradda xawaaraha dhaqdhaqaaqa, waxaan dooro doorashada Edit Speed ​​Muujis
In kasta oo halkan waxaan diiradda saaraynaa xawaaraha, farsamadan lagu saleyn karaa sifo kasta oo aad u animations aad ka dhigi kartaa hagaajin halkan wax badan.
Waxaan qabsato gooladaha xawaaraha halkan in ay isku dayaan oo ay u abuuraan sabayn saamayn nooca ay hoos u dhaqdhaqaaqa kasta dhibcood sare iyo dhaqdhaqaaq dhakhso ee 'cigta' laftiisa. Waxaad qabsato garaafyo noqon fudud gujinaya soo jiiday.
Hadda waxaan haystaa kubad in dadajiyaa Isku Xigta, iyo sort of socota illalintanada si wax yar ka barta sare oo hor mar tagtey hoos. Aan macquul ah laakiin inaan indhaha waxa ay u muuqataa ka farxiya.
5. Ku darista in dhaqdhaqaaqa qaab
Mid ka mid ah waxyaabaha ku saabsan naqshadeynta mooshin waa aad u baahan tahay in ay buunbuuniyaan saamayn, aan waxan sameeyey degdeg dhaqdhaqaaqa, laakiin kubada resolutely joogo goobo la mid kaamil ah oo dhan marti ah. Our tallaabada xigta waa in ay leeyihiin wax yar fidin sida ay hoos dadajiyaa, iyo in yar oo ah ergeyga sida ay ku dhufan doonto dabaqa, isagoo intaa ku daray in tani ay kaliya ka dhigaysa nidaamka dheeraad ah oo ka farxiyey isha, iyo stretch iyo squash runtii waa caadiga ah dhexdhexaad animation ah si hufan sababtan awgeed.
First off aan go'aan halkaas oo kubad fiican u noqon doonto wareega ee ay safarka, iyo in la abuuro naga keyframe waxaa guri le'eg. Waxaan go'aansaday on sare ee cigta, laakiin waxa laga yaabaa in meel kasta oo aad dhabtii doonaysid.
Maxaa yeelay, halkan waxa aynu dooni in dhigma isbeddel qaabka ay u cigta keyframes tip fiican halkan waa inay burburto dhammaan guryaha lakabka iyo U jaraa'id keyboard ah. Tani waxa ay muujinaysaa oo keliya guryaha la keyframe firfircoon kuwa (si loo hubiyo in aad hore u dhigay keyframe size a). Tani de-clutters waqtiga waxa kaliya oo ka dhigaysa habka shaqada wax yar ka sahlan.
Next waa xaalad ah in la abuuro keyframes Waayo, meesha aad rabto in aad kubada u fidiyey, iyo meesha aad rabto kubada xannibnaan, isticmaali COP iyo paste inay iyagii dhigay baraha midig, iyo xoogaa tijaabiyaan ilaa aad ka hesho transformations aad rabto. Waxaad u abuuri lahayo ku dhabta by unchecking ka icon waajahaa qasbaan hantida size ka dibna kaliya beddelo engegaan Dooxo x ama y si aad u hesho saamayn aad rabto.
Tani waxay dareen in mooshin sidaas muhiim u naqshadeynta mooshin, laakiin waa, sida dhaqdhaqaaqa, wax yar toosan ah, sidaas oo kale waxaan iyaga oo dhan dooran kartaa, oo taga si kaaliyaha keyframe ka dibna Easy fududee si ay u socon transformations ah.
Hadda iska cad tani waa dhaqdhaqaaq aad u aasaasi ah, laakiin mabaadii'da ay sii isku mid dhamaan naqshadeynta dhaqaaq, waxaad ku dari kartaa midabka iyo midabka Isbadal, isticmaali kala duwan ee saamaynta gudahood ka dib Raadka, xulashada Jilidda ah saamaynta ay qayb ka yihiin kuwo aad u caanka ah ee Motion Graphics , iyo wixii la mid ah.
Waxaan rajeynayaa in qof kasta oo u malaynayey fikradda ahayd ka baxsan iyaga ka arki kartaa in ay si dhab ah waa arrin ah ka shaqeeya dhaqdhaqaaq kasta oo loo oggolaado ka dib Dhibaatooyinka shuqulka aad u, naqshadeynta mooshin waa madadaalo, sidaas waxaa iyaga la abuurayo.
> Resource > Video > Sida loo abuuro Motion Graphics in dib markii Raadka